निर्वाचनपछिको राजनीतिक तरङ्ग
दोस्रो चरणका लागि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामले पनि एमाले अग्रता कायमै राख्यो । यसअगाडि वैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनसमेत एमालेकै पक्षमा थियो । अर्थात् बहुमत पदाधिकारी एमाले उम्मेदवार विजयी भएका छन् । बाँकी तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोज २ का लागि तोकिएको छ । तराई मधेशका आठ वटा जिल्लामा हुने तेस्रो चरण निर्वाचनले मात्रै अन्तिम नतिजा देला तर अहिले देशैभरि एमाले लहर छाएको छ । अघिल्ला दुई चरणका निर्वाचननबाट एमाले हौसिएको छ । प्रदेश नं. २ एमालेका लागि निकै कष्टकर हुने अनुमान गरिएको थियो तर चुनाव असोज २ गतेलाई धकेलिएपछि एमालेका लागि केही खुकुलो हुने अनुमान गरिएको छ ।
अन्तिम मतपरिणाम घोषणा हुने अवस्थामा पुगेको दोस्रो चरणको चुनाव धेरै दृष्टिले फरक रह्यो । पहिलो चरणमा दलले जबर्जस्ती तालमेल गर्दा मतदाताले नरुचाएको जस्तै यसपालि पनि दोहोरियो । जसले गर्दा गठबन्धनले दललाई खासै फाइदा पुुगेन । यसका अतिरिक्त यो निर्वाचनले विगतमा ज्यादै चर्चामा रहने गरेको अन्तर्घात शब्द फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ । चुनावमा हार्ने पक्षले सबै दोष अन्तर्घातीका पोल्टामा हालेर उम्कने उपक्रम थालेका छन् । विगतमा काँग्रेस वृत्तमा ज्यादै चर्चा हुने गरेको यो शब्दले अहिले भने एमालेभित्र पनि प्रवेश पाएको छ । धेरै ठाउँमा काँग्रेस एमाले अन्तर्घातका कारण पराजित भएको सत्तोसराप गर्दै छन् । २०४८ सालमा भएको उपनिर्वाचनमा काँग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्नस्वयं काँग्रेसी कार्यकर्ता नै खुलेर लागेको देखिन्थ्यो । त्यसपछि अन्तर्घात शब्द नेपाली राजनीतिको अभिन्न अङ्ग बन्न पुग्यो । यतिबेला त्यही शब्द र भावले नेपाली राजनीतिलाई डो¥याउन थालेको देखिन्छ तर यो त केवल दोष लुकाउने प्रपञ्च मात्रै हो । जबसम्म मतदाताले रुचाउँदैनन् उसले जित्ने त कुरै भएन । लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हुन्, सर्वशक्तिमान हुन् । जनताले दिने आदेश मात्र अन्तिम फैसला हो । नेता गणले बुझ्न सकेनन् नेपाली जनता कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको पेवा होइनन् । उनीहरू आफूलाई विश्वास गर्नेलाई चुन्नस्वतन्त्र छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमै जनताले आफ्नोस्वतन्त्रतामा कसैले धावा बोल्न खोज्दा नरुचाएकोस्पष्ट सन्देश दिइसकेका हुन् । त्यसैले दलबीचको गठबन्धनले हावा खाएको थियो । अहिले पनि जनताले इच्छा गरेका प्रतिनिधिलाई चुन्दा अन्तर्घात भएको आरोप लगाउनु मुर्खता मात्रै हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले सिद्धान्तभन्दा व्यावहारिक पक्षलाई बढी महìव दिएको पाइन्छ । नातापाता, साथीसङ्गीजस्ता पक्षस्थानीय तहको निर्वाचनमा अर्थपूर्ण देखियो ।
सबैलाई थाहा छ ठूला दलमा ठूलै गुटबन्दी छ । आफ्नो गुटका नेतालाई टिकट दिन हानाथाप गर्ने नेताहरूले स्थानीय मतदाताको रुचि र चाहना बुझ्न चाहेनन् । त्यसैले धेरै ठाउँमा नसोचेको परिणाम आयो । साथै दल भन्दा लोकप्रिय व्यक्तिले सफलता पाएको देखियो । त्यसैले कतिपयस्थानमा प्रमुख र उपप्रमुख अलगअलग दलका उम्मेदवार विजयी भए । उदाहरणका लागि नेपालगञ्ज हेरे पुग्छ । मेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धवलशम्शेर राणालाई भोट दिनेले अरूमा भने काँग्रेस एमाले र माओवादीलाई दिएको पाइयो । यसैलेस्पष्ट सङ्केत गर्छ जनता कसैका रैती हैनन् । लोकप्रिय व्यक्तिलाई मात्रै मतदाताले विश्वास गर्ने यथार्थ बुझ्न यति पर्याप्त हुनेछ । यति भएपछि अन्तर्घातको आरोप लगाएर केही हुने छैन ।
साथै एकपटक जितेपछि त्यो क्षेत्र दल विशेषको दाइजो वा पेवा नै हो भन्ने सोच धेरै नेतामा रहेको छ तर जनता त्यो स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले डडेलधुराको अमरगढीमा प्रधानमन्त्री देउवासम्बद्ध दल पराजित हुनु प¥यो भने एमाले अध्यक्ष मतदाता रहेको भक्तपुरको बालकोटमा वडा तहमै एमाले बढारियो । साथै भोजपुरदेखि रोल्पासम्मका रैथाने गढ भत्किए । उता दाङजस्तो ठाउँमा काँग्रेसको किल्ला भत्किएको छ । एमालेको रातो झण्डा फहराएको छ । यसलाई के भन्ने ? जनताको चाहनालाई कसैले मान्दिन भन्न सकिन्छ त ? निश्चय पनि सकिन्न ।
निर्वाचनमा हार जित बिल्कुलै स्वाभाविक हो । चुनावमा हार्दा र हिलोमा चिप्लिदा अन्यथा मान्नु पर्दैन । एउटा पदमा एक जनाले जित्ने हो । अरू हार्ने निश्चित हुन्छ । त्यसैले चुनावमा कुनै दल वा व्यक्तिले जित्दा वा हार्दा केही फरक पर्दैन । यतिबेला कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको हार जितको कुनै मतलव छैन । मुलुकले जितेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । जनताको घरदैलामा सिंहदरबारका हक अधिकार पुगेको छ । जनता बलियो भएका छन् । जनता जनार्दन हुन् । त्यसैले उनीहरूको निर्णय शिरोपर गरी दल र नेताहरू अघि बढ्दा मात्रै सबैको भलो हुने हो । कसैलाई दोष थोपरेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्नु विल्कुलै गलत हो । अघिल्ला निर्वाचन एमालेका निम्ति सुखद् भए पनि धेरै मात्तिनु पर्ने अवस्था भने छैन त्यस्तै काँग्रेस पनि आत्तिहाल्नु पर्ने कारण छैन । जनता सधैँ सबैप्रति उदार हुँदैन । समय र परिवेशबमोजिम बढो निर्मम निर्णय गरिदिन्छन् । साथै प्रदेश नं. २ को चुनाव नभएसम्म कसको हैसियत कति भन्ने अनुमान लगाउन पनि सकिन्न ।
तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको सहभागिताको विषय अझै अन्योलपूर्ण छ । संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडान उसले छाडेको छैन । उनीहरूको मागबमोजिम तत्कालै संविधान संशोधन भइहाल्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छैन । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ र समर्थन बिना त्यो सम्भव छैन । एमालेबाहेकको दुई तिहाईको कसरत छेपाराको कथा हुने मात्रै हो । यसका लागि एमालेसहित गम्भीर छलफल आवश्यक छ । यसमा स्वयं राजपाको भूमिका महìवपूर्ण हुनेछ । उसैले पहल गर्नुपर्छ । घुक्र्याएर वा धम्क्याएर संशोधन हुने देखिएन । यसैको नयाँ शृङ्खला नेपाली राजनीतिक वृत्तमा फेरि दोहरिन लागेको प्रतीत हुन्छ । राजपाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सोच बनाएको खबर सार्वजनिक भएको छ । अनि प्रमुख प्रतिपक्षी पनि नयाँ उसको समर्थन जुटाएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेको चर्चा छ तर तत्कालै यो परिस्थिति निर्माण हुने अवस्था बनेको छैन । जबसम्म माओवादी केन्द्रको समर्थन पाउन सकिन्न तबसम्म काँग्रेस एमाले कसैले पनि सरकार बनाउन सक्ने ल्याकत हुने छैन ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि सार्न राजपाको दबाब खपिनसक्नु रहेको यथार्थ सबैलाई ज्ञात भएकै विषय हो । असोज २ को निर्वाचन पनि उसकै दबाबमा धकेलिएको हो तर त्यही प्रदेशका मतदाता भने राजपाको मागप्रति सहमत थिएनन् र अहिले पनि छैनन् । निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्न जनतामा रहेको आतुरी स्पष्ट भएको छ तर राजपाको हठका कारण त्यो सम्भव भएन । अब असोज २ मा हुने निर्वाचनमा राजपा सहभागी भएन भने उनीहरूका लागि थप घातक हुने देखिन्छ । स्थानीय तहका नेताहरू राजपाको निर्णय अवज्ञा गर्ने अवस्थामा छन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको मुखमा कतिपय प्रभावशाली नेता अन्य दलमा प्रवेश गरे । कतिले त विद्रोह गरेरस्वतन्त्र उमेदवारी नै दिए । एक जनाले मेयरमा विजय प्राप्त गरेका छन् । यतिबेला राजपा दल दर्ता गर्ने प्रक्रियामा लागेको छ । यद्यपि यो मुद्दामा पनि नेतृत्व एकमत देखिँदैन । दोस्रो चरणकै चुनावमा पनि भाग लिनुपर्छ भन्ने मत बलियो थियो राजपाभित्र तर त्यसबखत बहिष्कार गर्ने पक्षको बोली बिक्यो । अब भने चुनावमा भाग नलिने हो भने राजपाको आधारभूमि पनि गुम्ने खतरा छ ।